၁။ အ ၀ တ်လျှော်ခန်းခြောက်ခန်းအတွင်းမှမနှစ်မြို့ဖွယ်အနံ့များကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
အဝတ်လျှော်စက်စည်မှ 2. မှိုနှင့် grime ဖယ်ရှား !! (နေ့စဉ်သုံးပတ်မှ ၂ ပတ်ကြာပြီးနောက်)
3. ရေနုတ်မြောင်းပိုက်မှအညွန့်ကိုဖယ်ရှား !!
အကြိမ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော် (တစ်နှစ်ခန့်ခန့်) အသုံးပြုနိုင်သည်။
5. Magnesium ကိုပိုက်ကွန်မှအကြိမ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ဖယ်ရှားပြီးဥယျာဉ်သို့မဟုတ်ပန်းပွင့်များတွင်သုံးပါ။ မဂ္ဂနီစီယမ်သည်အပင်များရှင်သန်ပေါက်ဖွားစေခြင်းအားဖြင့် photosynthesis အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုမှု - ဝါဂွမ်း၊ ပိတ်ချောနှင့်ဒြပ်အမျှင်များ၏အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ သန့်စင်ခြင်းနှင့်ပိုးသတ်ခြင်းအတွက်အရန်ထုတ်ကုန်များအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
သံချေးတက်ခြင်းမရှိဘဲမျက်နှာပြင်အောက်ဆီဂျင်ကြိတ်ခွဲခြင်းအဆင့်မြင့်အရည်အသွေးမြင့်အလူမီနီယံပရိုဖိုင်းများကို အသုံးပြု၍ ဤချိုင်းထောက်နေရာတွင်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။ ဗဟိုပိုက်ကိုအားဖြည့်ပေးခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောပံ့ပိုးမှုပေးသည်။
သုံး၍ ပိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်အထူးပြုလုပ်ထားသောဒီဇိုင်းသည်ပိုကောင်းသောလုံခြုံသည့်ဝန်ကိုဖြစ်စေသည်။ ရော်ဘာရေပိုက်နှင့်ပြွန်သည်ပွတ်တိုက်မှုနှင့်အသံပဲ့တင်သံများကိုလျှော့ချသောသတ္တုပွတ်တိုက်အားကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ခိုင်ခံ့သောခိုင်ခံ့မှု၊ အမျိုးမျိုးသောအမြင့်နှင့်အညီသင့်လျော်သောမြေပြင်ပွတ်သတ်နိုင်စွမ်း၊ တိဘက်သတ္တုကိုယ်ထည်များကိုခိုင်ခံ့စေခြင်း။